Magacyada iyo halka ay kasoo kala jeedaan Soomaalidii lagu dhuftay gantaalka - Caasimada Online
Home Warar Magacyada iyo halka ay kasoo kala jeedaan Soomaalidii lagu dhuftay gantaalka
Magacyada iyo halka ay kasoo kala jeedaan Soomaalidii lagu dhuftay gantaalka
Akhriso magacyada qaar ka mid ah dadkii duqeyntaas ku nafwaayay
1-Deeq Mahad Faarax oo kasoo jeeda Laascaanood (Dhimasho)
2-Xafsa Cumar Daroori oo kasoo jeeda Laascaanood (Dhimasho)
3-Ayaan Maxamed oo kasoo jeeda Laascaanood (Dhimasho)
4-Faadumo Yuusuf Haybe oo kasoo jeeda Laascaanood (DHimasho)
5-Aaamina Baaxeer oo kasoo jeeda Burco Dhimasho Balse si rasmi ah looma xaqiijin. 6-Hibaaq Axmed Tarabi oo kasoo jeeda Burco oo wali dhimashadeeda lagu muransan yahay.
7-Muxumed ISmaaciil oo kasoo jeeda Hargeysa (Dhimasho)
8-Maxamed Aadan Cabi( Maxamed Timo) oo kasoo jeeda Burco (Dhimasho)
9-Cabdiraxman hassan mohamoud oo dhaawac ah kana badbaaday duqayntaas kana soo jeeda laascaanood.
10-Maareeye Cabdiraxmaan oo dhaawac ah kana badbaaday duqayntaas kana soo jeeda laascaabood.
11-Cabdi Xasan oo dhaawac ah kana badbaaday duqantaas kana soo jeeda Laascaanood.
12-Guuleed Cabdifataax Giirre oo kasoo jeeda Hargeysa (Dhimasho)
13-Cabdirisaaq Dayyaxo kana soo Jeeda Burco (Dhimasho)
14-Xamdi Xasan Faahiye oo kasoo jeeda Laascaanood waa dhaawac.
15-Ibrahim Ahmed Sacadaale (Dhimasho).